Isiraely: Voka-pikarohana momba ny fampiasan’ny sipa Palestiniana finday hifanaovana fotoana · Global Voices teny Malagasy
Nivoaka ny 16 Avrily 2008 3:19 GMT
Nanoratra taratasy mitondra ny lohateny hoe “Filalaovana afo: ny fahazaran'ny adolantsentovavy palestianiana any Isiraely mampiasa finday” i Hiyam Hijazi-Omari sy i Rivka. Ao anatin'ny fikarohany dia hadihadian'izy ireo ny fampiasan'ny (sasany) amin'ny tanoravavy palestiniana any Isiraley finday. Avoitran'ny taratasy ny antsipirian'ny isan'ny
fiday ampiasan'ireo sipakely any Isiraely ireo nandritra ny fotoam-pikarohana (2003-2006), nomen'ny sipany (tsy vita vodiondry), ary tsy fantatry ny ray aman-dreny akory ny fisiany.
Manoratra ao amin'ny bolongany shift6 i Danah boyd:
Manome finday ny sipany ny bandy palestiniana mba ahafahany mifandray ankolaka aminy tsy misy fifampikasokasoham-batana izay mety hitondra ahiahy. Fantatry ny sipa mazava anefa fa tsy eken'ny ray aman-dreniny ny hananan'izy ireo fahafaha-mifandray manokana amin'ny kaofiboay – sahirana tokoa izy ireo manafina ny finday ary mizaka ny vokany raha tratra. Raha manome finday ny tovolahy ho fitaovam-pahafahana, dia misy sarany izany. Antenain'ny bandy fa izy ihany no ifandraisan-drasipa ary tsy misy zavatra hafa na inona na inona azo atao amin'iny finday iny. Ao amin'ny lahatsoratra, dia asehon'i Hijazi-Omari sy i Ribak ny fahadisoam-panantenan'ny tovovavy iray miteny fa ” tsy nandositra ny fonja aho mba hidirana fonja hafa”. Mampiasa ny fomba mahatalanjona moa ireo sipa ireo ahafahana mampiasa ny finday, manafina azy amin'ny olona ary mividy fahana fiantsoana.
Tsy isalasalana fa manivaka mamakivaky ny lalàn-kolontsaina any Azia Andrefana ny haitaom-pifandraisana findehandeha amin'ny fahazoana maridrefy manokana. Ohatra hafa amin'izany ny:
- lahatsoratra ao amin'ny BBC amin'ny fampiasan'ny bandy any Emirà Arabo mitambatra ny Bluetooth (Nifimanga?) handefasana hafatra manokana ho an'ny sipa (eny ankalamanjana).
- Efa voasoratra teto amin'ny GVO koa ny fikarohan'i Adnan Gharabiya momba ny fampiasan'ny tanora Bedouin Isiraeliana ny IM (inona izany fa tsy fantatry ny mpandika